CofaMeter: UkuKhangela ukuKhangelwa kweKhankaso, ukuKhangela okuDibeneyo, kunye nokuKhangela ukuKhangela | Martech Zone
Umsebenzi wokukhangela umkhondo uhlala, ngelishwa, emva kwexesha xa iinkampani ziphuhlisa amaphulo, ukujonga umkhondo wokudibana, okanye ukulinganisa ukuguqulwa. Ukunqongophala koqeqesho ekuphuhliseni nasekulandeleleni amakhonkco kunokubangela uthotho lwemicimbi esezantsi eyenza ukuba kube nzima ukulinganisa intsebenzo kwii-mediums nakwimijelo.
CofaMeter liqonga elibekwe embindini kunye ne-API enxulumene nayo eyenza ukuba iinkampani, iiarhente, abathengisi, kunye nabapapashi bakhe iinkqubo ezimalunga nokuphumeza kunye nokulinganisa ikhonkco labo lokucofa kwinqanaba. Eminye yemisebenzi ephambili abanokuyilungisa ibandakanya ukulandela umkhondo wokudibana, ukulandela umkhondo, ukulandela umkhondo wepikseli, iiparameter ze-URL ezimfutshane, ukudityaniswa kokufinyezwa kwe-URL kaGoogle, ukudityaniswa kwamashishini amancinci, ukujolisa kwe-IP, ulawulo lwekhonkco olunophawu, kunye nokujikeleza kwekhonkco.
Qhagamshela ukuKhangela, iiNdlela, ukuHlola, kunye nokuSebenza
CofaMeter inempawu ezingaphezu kwe-100 ezintle:
Phinda uqondiseIimpawu ze-redirection zibandakanya ukujoliswa kwakhona okujolise kwilizwe, ulwimi, uhlobo lwesixhobo, kunye nohlobo lomsebenzisi. Ukuphinda uqondise kwakhona kunokuba kukungahleliwe, ukulandelelana, ubunzima, ukucofa okokuqala, ukucofa ubuninzi, ukucofa iphasiwedi, ixesha elimiselweyo, i-SSL kunye ne-non-SSL, amandla, ukujikeleza kwe-IP, injini yokukhangela, iiparameter ze-URL, ukunxibelelana kwe-URL, ukubethela i-URL , ukuhambisa iphepha, ukusula ngokudluliswa, abachazi abangaziwayo, inqanaba lokuqala okanye ii-subdomains, ukumakisha ikhonkco, ukudibanisa ikhonkco, kunye nokunxibelelana okuninzi kungenisa ngaphakathi okanye indalo.
Ukulandela umkhondo - amakhonkco anokulandelwa kwisitampu, idilesi ye-IP, ilizwe, ingingqi, isixeko, umbutho, ulwimi, uhlobo lwesikhangeli, uhlobo lweqonga, iselfowuni, uhlobo lweendwendwe, ezizodwa / ezingafaniyo, umthombo, iiparameter zesiko, amagama aphambili, kunye nokunye.
UkuKhangela ukuKhangela -Uguquko lunokulandelwa licandelo lefaneli, ii-cookies ezilungelelanisiweyo, uguquko oluninzi, ii-ID zemveliso, iiparameter zesiko, ixabiso lokuguqula, ixabiso lekhomishini, i-SSL okanye i-non-SSL, uvavanyo lwe-A / B, ubumfihlo be-UE, ukubekelwa bucala kwe-IP, ikhonkco logaxekile, kunye I-URL ye-UTM yeGoogle Analytics.
Uhlalutyo lwekhonkco -I-KPIs yedashboard, iingxelo zenkqubela phambili, iingxelo zomkhankaso, iingxelo zepikseli, uthelekiso lotshintsho, ucofe imijelo, ucofa imephu, amaxesha ngamaxesha, izikhangeli, iidolophu, izizwe, ii-ISPs, iiparameter, imithombo, amagama aphambili, iidilesi ze-IP, amazinga okuguqula, iithegi, iilwimi, imali kunye nokuninzi.
Nika ingxelo -Izinto ezithunyelwa ngaphandle ze-Excel (CSV), ingxelo ezimfutshane, i-imeyile kunye nezaziso zomsindo, iingxelo ezinokwenziwa ngokwezifiso (ilogo, ixesha lendawo, imali kunye nolwimi).
Nxibelelana Ukwabelana ngasese, ukwabelana esidlangalaleni, ukwabelana nge-imeyile, ulawulo lweeakhawunti, kunye nokunxibelelana okuzenzekelayo.
Qhagamshela ukudityaniswa -Ii-Adwords, iinethiwekhi ezihambelana nazo, uGoogle Analytics, iphepha elingasemva, iChannel, iFirefox, iMegaphone, iReband, ukuPhinda ukuJonga kwakhona, ukuThengisa kwakhona, iSafari, iVenkile kunye neWordPress.
uphuhliso -Iindawo zokugqibela ze-API ezigcweleyo, amaxwebhu aneenkcukacha, indawo yesanti, amaqhosha e-API amaninzi, kunye nokubonisana okukhoyo.
Cofa uMeter ukuLizisa njani ixabiso
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye CofaMeter.
tags: Ukulandela umkhondonqakrazaukulandela umkhondoUhlalutyo lwekhonkcoukulandelela ikhonkcoikhonkco lokudityaniswa komkhondoikhonkco lokukhangelwa kwengxelophinda uhambise ilizwePhinda uhambise kwakhona ngohlobo lwesixhoboyisa kwakhona ngolwimiuqondisa kwakhona